Ingabe i-Google Cookie iyawa? | Martech Zone
Lwesine, Disemba 18, 2008 NgoMsombuluko, Disemba 22, 2008 Douglas Karr
Nginalo mbono wokuthi akukho lutho olungenakulinganiswa. Amabhizinisi aphumelelayo avame ukudlula amandla abo okuphatha ukukhula, ubuchwepheshe obusebenza ngezinga elincane akuvamile ukuthi benze umsebenzi ngezinga elikhulu… ngisho nabasebenzi bavame ukukhushulwa ngaphezu kwamandla abo.
-Google ibone ukukhula okungakaze kube khona eminyakeni eyishumi edlule. Isikhathi esiningi besibabeke obala futhi sabasebenzisa njengegeji lethu lempumelelo. Izolo, sehlise ibha nokho, siqala ukuphenya ngaphandle kwezindonga zethu nokubheka kakhudlwana iGoogle lapho kwenzeka okungajwayelekile.
Ukwehluleka kwe-Google kwakamuva:
Namuhla bengizophawula ngebhulogi lomngani wami u-Erik Blogger (Indoda ihlasela intombi nge-cheeseburger), kepha angikwazanga ukuthola ikhasi lamazwana ukuthi lilayishe.
Izinsuku ezimbalwa, asikwazanga ukubhalisa noma yimaphi amasayithi nge I-Google Search Console. Isiza siqhubeke nokusinika iphutha lokuqinisekisa ukuthi besibuyisa amakhodi ezimo angalungile kumakhasi ethu angama-404 (angatholakalanga). Eqinisweni, yethu yesikhulumi sokubloga ezinkampani ibibuyisa amakhodi afanele. Ngemuva kosuku noma ngaphezulu, konke kwaba kuhle futhi!
-Google Reader njalo kubonakala kunjalo ukuthunga kimi, ukungikhombisa okuphakelayo engivele ngikufunde… kaninginingi futhi kaninginingi.
Sisebenzise uhlelo lwe- -Google Analytics akhawunti yeklayenti kuleli sonto ekhombise ukuthi isayithi iqinisekisiwe ekhasini elilodwa, ayiqinisekisiwe kwelinye ikhasi, futhi ibingathathi izibalo. Bekufanele sisuse i-akhawunti bese siqala kabusha.
QAPHELA: 12/21 - Selokhu ngaguqula okuphakelayo kwami ​​kwa-Google, angikwazi ukungena ngemvume bese ngithola izibalo zami nekheli lami elidala lokuphakelayo alivuseleli.
Ukuphela kwento iGoogle ebonakala ingaze yehluleke kuyo ukukhangisa okufanele. Hmmmm.
Tags: amanani wengeze-enqoleni yeselulaiselula sdkI-schmapIsinciphisiizinkanyeziuhlelo lokusebenza lweselula lwe-starbucksYibuke Manje Ezokuzijabulisa
Dec 19, 2008 ngo-6: 57 PM
Kuhle ukukwazi ukuthi i-Google ayikahluleki ukuletha izikhangiso kithina. Ngangiqonda ukuthi ezinye zezinsizakalo zamahhala ziphansi ngezikhathi ezithile, kepha okungikhathazayo lapho izinhlelo zabo zokusebenza “zebhizinisi lesigaba” (imeyili ebanjelwe, izinhlelo zokusebenza, njll) ziqala ukuba phansi amahora noma izinsuku ngesikhathi. Ngaphandle kokusho ukuthi bazobuyiselwa nini noma nini. Isikhathi esilahlekile, okusho ukuthi ebhizinisini lami kusho imali elahlekile. Yona kanye imali engithi ngiyonga ngokungazisebenzisi izinto zami.
Dec 22, 2008 ku-11: 56 AM
Bengibhekene nezinkinga ezithile nge-blogger yami futhi. Ukungasho, Izaziso zami zeGoogle zihamba phambili. Ngijabule ukwazi ukuthi angingedwa ngibona lokhu!